TS Editor: Sida loo Edit TS Files
> Resource > Video > Sida loo Edit TS Files
Maqaalkani waa mid tutorial faahfaahsan oo ku saabsan sida loo edit TS files, oo ay ku jirto jaritaanka, lana siii, ku biiro, qoqobada, qabsado saamaynta iyo ku daray xubno shaqsinimo kala duwan sida muusiko, PIP, qoraalka iwm
Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa editor weli xirfad u fududahay in la isticmaalo TS. Wondershare Video Editor ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ) waxa uu noqon karaa doorashada ugu fiican ee aad u. Iyada oo badan oo muuqaalada tafatirka gaar ah, ha kartaa in aad si fudud oo dhaqso loo abuuro filimada guriga qabow aad TS video files.
Qaybta 1aad: Sida loo Edit TS File
Qeybta 2: Best Video ayeey Software bilowga ah in Edit TS File
Hadda, waxaan ku tusi doonaa sida loo isticmaalo this caqli TS qalab tafatirka in xaalkaa files TS leh classic sida goo, kala, & dalagga, iyo sidoo kale shakhsiyeeyo aad TS files leh sawir-in-sawir, music, filtarrada, kala guurka & dheeraad ah.
Sida loo Edit TS File
1 Import TS files si album User ee
Si aad u dajiyaan files TS ka your computer to this editor TS weyn u tafatirka, riix "Import" doorasho ee dhinaca kore ee bidix ee interface ugu weyn. Isla markiiba, aad arki doonaa dhammaan faylasha TS daray qoran yihiin heestii Users '.
2 files Edit TS
Next, jiidi hal ama TS badan files ka Album in ay Jadwalka ugu hooseysa si ay u bilaabaan sixiddiisa videos.
Editor TS - wada biir video clips
Si aad isku biiri laba ama dhowr clips video, kaliya iyaga diyaarin in Timeline sida waafaqsan nidaamka play ah. Oo haddii aad rabto in aad beddesho amarka, kaliya jiidi oo hoos u video clip in ay meesha saxda ah ee aad rabto in aad Timeline ah. Laakiin ogow in aadan jiidi mid clip in kale, ama aad u kala qaybsan tahay doonaa.
Editor TS - yaree video clip ah
Haddii aad rabto in aan kala tagno video clip ah, kaliya waxa guji in Timeline ah, jiidi sare ee cas Time Tusiyaha in booska aad rabto, ka dibna ku dhuftay "maqas" button loo sameeyo.
Editor TS - Dalagyada, isku shaandheyn, isbedel video & saamayn audio iyo video xawaaraha
Midig u guji doonayo aad video clip in Timeline ka dibna dooro ikhtiyaarka Edit. In tafatirka daaqadaha pop-up, waxaad isku shaandheyn karaa, dalagga, videos xawaaraha iyo isbedelka video saamayn. Laakiin haddii aad doorato halkii "Audio fuji" doorasho, waxaad ka heli kartaa wadada maqal ah oo video ah. Ka dibna waxaad tirtiri kartaa ama wax ka bedel clip ka audio by righting u riix.
Editor TS - dar qoraalka, PIP, kala guurka, Intro / credit iyo audio
Hit aad feature menu doonayo in interface in la furo maktabadda khayraadka baahisey. Markaas si toos ah jiidi template aad jeceshahay maktabadda khayraadka si clip video in Timeline ah. Next, aad edit karaa template ee aad video u gaar ah.
3 wadaag videos
Marka aad u samayseen, oo aad ku dhacay karaa "Abuur" badhanka si ay u dhoofiyaan abuurkiinna. Waxaad dooran kartaa mid ka mid ah afarta kala doorasho: Device, Qaabka, YouTube iyo DVD. Just aad masterpiece qoyskaaga iyo saaxiibadaa wadaagaan.
Qeybta 2: Best Video ayeey Software bilowga ah in Edit TS File (Video Tutorial)